Soosaarayaasha Chillers - Shiinaha Chillers Factory & Alaab-qeybiyeyaal
LHVE Taxanaha Joogtada Joogtada Isku Beddelista Iskuwareejinta Chiller
Qaybsan Hawo-qaboojiye Chiller
Gawaarida xawaaraha sare ee isku-dhafan ee magnetic-ga ah PMSM-ka ugu horeeya adduunka ee xawaaraha sare iyo xawaaraha sare ku shaqeeya ayaa loo adeegsadaa qaboojiyaha bartamaha bartamaha. Awooddiisu waxay ka sarreysaa 400 kW xawaareheeda wareegtuna wuxuu ka sarreeyaa 18000 rpm. Waxtarka mootadu wuxuu ka sarreeyaa 96% iyo 97.5% ilaa ugu badnaan, kana sarreeyo heerka heerka 1aad ee heer qaran ee waxqabadka mootada. Waa is haysta oo miisaanka culus. Xawaaraha sare ee 400kW PMSM wuxuu culeyskiisu le'eg yahay 75kW AC induction motor. Adoo adeegsanaya tiknoolajiyada qaboojiyaha buufiska ee wareegga ah ...
Qaboojiye Chiller biyo qaboojiye ah
Waa nooc ka mid ah qaboojiyaha qaboojiyaha biyaha lagu qaboojiyo oo leh kombaresarada faashadda daadadka kaas oo ku xirnaan kara dhammaan noocyada unugga isku xidhka marawaxadaha si loo ogaado qaboojinta dhismooyinka waaweyn ee rayidka ama warshadaha. 1.Qiyaasta xakamaynta heerkulka biyaha oo ay ugu wacan tahay hagaajinta awoodda stepless laga bilaabo 25% ~ 100%. (Hal comp.) Ama 12.5% ​​~ 100% (dual comp.) Waxtarka sarrifka kuleylka ee 2.Higher oo ugu wacan habka uumi baxa daadadka. 3. Waxtarka sare ee hoos yimaada qaybta qayb ahaan iyada oo ay ugu wacan tahay isbarbar dhigga naqshadaynta hawlgalka. 4. saliid isku halaynta sare ...